टेबल माथी सलामी लिएर भाइरल भएका मेयर भन्छन गल्ती भए माफी चाहान्छु » Nepali Mato
टेबल माथी सलामी लिएर भाइरल भएका मेयर भन्छन गल्ती भए माफी चाहान्छु
९ असार २०७६, सोमबार १९:३९ June 24, 2019 Nepali MatoLeaveaComment on टेबल माथी सलामी लिएर भाइरल भएका मेयर भन्छन गल्ती भए माफी चाहान्छु
सार, काठमाडौं । अहिले देशभरका स्थानीय तहमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता चलिरहेको छ । सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमको बजेट एक लाख रुपैयाँ भर्खरै स्थानीय तहहरुले पाएका छन्, त्यसैले सबैतिर हतार–हतार कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् ।
तर, प्रतियोगिताको भन्दा अतिथिको सलामी बढी चर्चामा छ । एकपछि अर्को तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा छाएका छन्, जसमध्ये धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर पर्शुराम नेपालको सलामीको तस्वीर ‘ट्रोल’ नै बनेको छ ।
मेयर नेपालका अनुसार उनले टेबलमाथि उभिएर सलामी लिएकै हुन् । ‘नगरपालिकाको शिक्षा तथा खेलकुद शाखाले कार्यक्रम गरेको थियो । खेलाडीलाई सम्मान हो, गर्नुपर्छ भनेपछि मैले त्यसरी सलामी दिएको हुँ’ उनले भने ।
गलत गरेंछु भन्ने लागेको छैन ? भन्ने प्रश्नमा मेयर नेपाल भन्छन्, ‘यदि मबाट गल्ती भएको भएको रहेछ भने क्षमा माग्छु । तर, अरुले पनि यसरी सलामी लिएको देखेको छु । आयोजकले गर्नुपर्छ भनेका थिए ।’
अरु भन्दा अग्लो हुने चाहना बढ्दै जाँदा मेचमा चढेको हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ । रातो कपडा, अग्लो फल्याक चाहिने कुनै नियम नभएको प्रष्ट पार्दै उनी भन्छन्, ‘अरु अतिथिसँगै उभिएर खेलाडीहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्न सकिन्छ । तर, अरुभन्दा अग्लो देखिने व्यक्तिगत मोहले त्यस्तो भएको होला ।’ साभार Onlinekhabar
जय बाग्लुङ कालीका माता । भोलिको राशिफल हेरौ अनि शेयर गरौ ।
गलबन्दी मिलेको विषयमा प्रकाश सपुतको शम्भु राइलाइ मन छुने पत्र -कुन कसम खायर भनु यो भन्दा पहिला त्यो गीत सुनेको थिइन्
५ असार २०७६, बिहीबार ०५:२९ June 20, 2019 Nepali Mato
आहा !! भिडियोमा हेर्नुहोस् रत्नपार्कमा रातपरेपछि सुरु हुन्छ सर्मिलाको व्यापार (भिडियो)
१७ असार २०७६, मंगलवार ०९:३४ July 2, 2019 Nepali Mato
होटल तथा पार्टी प्यालेसमा दर खानेलाई कारबाही हुने
२३ श्रावण २०७६, बिहीबार १५:५४ August 8, 2019 Nepali Mato
वाह यस्तो पो सरकारी विद्यालय ! थेग्नै नसक्ने गरी विद्यार्थी, एउटै कक्षामा नौ सेक्सन !
११ जेष्ठ २०७६, शनिबार १३:२२ May 25, 2019 Nepali Mato
तेह्र बर्षमा बिहे भयो चौध बर्षमा छोरा जन्मियो , बिगत सम्झिदै रोइन हर्के हल्दारकि देउती ….( हेर्नुहोस भिडियो )
१९ असार २०७६, बिहीबार ०९:०० July 4, 2019 Nepali Mato